Soosaarayaasha iyo Alaableyda Kuleyliyaha Gaaska Shiinaha | Double Rings
Awood: 0.5T / h ~ 50T / saacaddii
Nooca: Steam Boiler
Cadaadis: 0.1Mpa ~ 3.8Mpa
Shidaalka: Gaaska Dabiiciga ah, LPG, gaaska Exhause, Diesel, saliida culus, Dual shidaalka (gaaska ama saliida) iwm.
WNS taxanaha kuleeliyaha uumiga gubanaya saliida ama gaaska waa Horizontal gudaha gubida sedex kuleeliyaha tubbada dabka, wuxuu qaataa foornada kuleeliyaha qaabdhismeedka gadaal qoyaanka, qiiqa heerkulka sareeya, gaaska leexashada si loo xoqdo saxanka tuubada qiiqa labaad iyo sedexaad, kadib qolka qiiqa kadib. lagu sii daayay jawiga tubbada qiiqa.
Waxaa ku yaal Smokebox Cap xagga hore iyo gadaalba gadaal, oo si fudud loo dayactiri karo.
Gubasho heer sare ah ayaa adkaynaysa isku-habeynta saamiga otomaatiga, xakamaynta biyaha tooska ah ee biyaha, bilowga iyo joojinta barnaamijka, qalliinka otomaatiga ah iyo tikniyoolajiyadda kale ee horumarsan, ayaa sidoo kale leh heeganka heerka biyaha & Sare ee biyaha iyo shaqada ilaalinta heerarka biyaha aad u sarreeya, cadaadiska aadka u sarreeya, dami iwm.
Mashiinka kuleylku wuxuu leeyahay astaamaha qaab dhismeedka isku midka ah, aamin ah oo la isku halleyn karo, hawlgal sahlan, rakiba deg deg ah, wasakheyn yar, dhawaqa hoose, iyo hufnaanta.
1.Qaabka guud waa macquul iyo is haysta, waana fududahay in la rakibo.
Kuleeliyaha ayaa ka kooban jirka kuleeliyaha, qiiqa tubbada iyo nidaamka tuubada. Jirka kuleylka iyo qiiqa ayaa lagu dhameeyay warshadda, dhuumaha, baalka iyo cabirka kuleylka ayaa sidoo kale lagu dhammeeyay warshadda. Macaamiisha kaliya waxay u baahan yihiin inay isku keenaan kuleylka iyo qiiqa qiiqa, isku xira gaaska, quwada, biyaha ka dibna
in la tijaabiyo orodka, si weyn loo gaabiyo waqtiga rakibida, lana hubiyo tayada kuleylka.
2. Naqshad casriyeysan, qaabdhismeedka oo dhan, qolka gubashada waxay ku urursan yihiin daboolka qiiqa hore, jirka ayaa leh dusha kululeynta iyo qolka gubashada. Waa qaab-dhismeedka macquulka ah, isku-darka, isticmaalka hoose ee birta, xabka foornada waa foorno foornada qaab-dhismeedka, lakabka dahaarka waa aaladaha korantada kuleylka cusub, baakadaha midabka, qaabka baakadaha waa qaab-dhismeedka, waxqabadka kuleylka, culeyska, qaab dhismeedka, cabirka, Qaabeynta qaabka waa mid horumarsan oo garasho leh.
Qalabka biyaha ee quudinta ku qalaji dhinaca midig ee salka kuleylka, dhismaha oo dhan, uma baahna aasaas kale.
3. Wareegga biyaha ee fudud, qaabdhismeedka macquulka ah ee qaybaha cadaadiska, dammaanad qaadka tayada biyaha, ammaan u ah inuu socdo
4. Qalabka Ancillary oo dhameystiran, tikniyoolajiyad dhameystiran oo horumarsan
WNS Steam Boiler gubanaya saliid ama gaas
MoodelShayga WNS0.5-0.7-YQ WNS1-0.7-YQ WNS2-1.25-YQ WNS4-1.25-YQ WNS6-1.25-YQ
Heerka Steam Temp. ℃
Dusha sare ee kululaynta m²
La rakibay Cabbirka Guud
Kuleeliyaha Miisaan Ton
Isha Awooda V 380V / 50Hz
Moodhida Biyaha Mashiinka
Saliid Fudud / Saliid culus / Gaaska Magaalada / Gaaska Dabiiciga ah
ShidaalkaIsticmaal Saliid Fudud
Gaaska dabiiciga ah 144.16
< Fasalka 1aad
MoodelShayga WNS8-1.25-YQ WNS10-1.25-YQ WNS15-1.25-YQ WNS20-1.25-YQ
Hore: Kuleyliyaha Saliida Shidaalka
Xiga: Xawaare Veroical / Dhuxul Kulul
kuleeliyaha gaaska shiinaha
mashiinka gaaska hawada ee china
china lpg kululeeyaha
Gaas kuleeliyaha kusalaysan, kululeeyaha lpg
gaaska kuleyliyaha kuleylka
lpg kululeeyaha uumiga
kuleylka dabiiciga ah
kuleylka dabiiciga ee gaaska dabiiciga